Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Mariano Diaz Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Ihe omuma anyi nke Mariano Diaz na agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ibu, Cgbọ ala, Net Worth, Web na Life Life.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị na-agba ọsọ egwuregwu Spanish-Dominican. Anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata gaa na galari okenye - nchịkọta zuru oke nke Mariano Diaz's Bio.
Lee, anyị na-ewetara gị Mariano Diaz Early Life and Great Rise.
Ee, onye ọ bụla maara Mariano dị ka onye ọkpụkpọ Real Madrid bụ onye nọ na mbụ enweghị mmasị MA mere ka amara gị na ụbọchị ahụ mara mma (1st nke Mach 2020), ụbọchị o mere okpukpu abụọ nke Real Madrid na mmeri 2-0 megide FC Barcelona.
Versiondị nke anyị bụ Mariano Diaz's Biography bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Anomụaka Mariano Diaz:
Nke a bụ otu oge mbụ nke Foto Mariano Diaz
Ibido, akpọrọ ya “Anụ ọhịa ahụ“. A mụrụ Mariano Díaz Mejía na 1st ụbọchị nke August 1993 na nne ya, Mariana Mejía na nna, Mariano Díaz (onye na aru aru) n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Barcelona, ​​Spain.
Ndị na-agba ọsọ Spanish na-etolite na nwanne ya nwoke nke okenye na nwanne nwanyị Premiumà de Mar, a na-ahụta obodo Spanish dị ka ebe ndị njem nleta na ebe obibi maka Barcelona.
As ASweanetị tinye ya, nne na nna Mariano Díaz mgbe a mụrụ nwa ha nwoke ka aha ya bụ “Mariano Diaz”Na nke a mere ya onye nke atọ ga-aza aha ya n’ezinaụlọ ya.
Ị maara?… Abụọ n'ime ndị nne na nna Mariano Diaz - nna ya na nna nna ya gụnyere onwe ya nwere aha yiri ya.
Dịka nwata, Mariano na-eto eto sooro nne na nna nna ya nọrọ ọtụtụ oge wee bụrụ onye bụbu onye egwuregwu nke ezigbo ụlọ ọgbakọ Catalan. N'ihi njikọ chiri anya ha, eji nwayọọ nwayọọ ewebata ya banyere egwuregwu bọọlụ.
Dị ka mama Mariano Diaz si kwuo, mgbe Mariano na-egwu bọl dịka nwatakịrị, mgbidi dị n'ezinaụlọ ahụ tara ahụhụ nke ukwuu ka ọ na-enwe akara bọọlụ.
Ọ gwakwara ya Eke na Mariano jikwa sofas mee ihe mgbaru ọsọ ya. Nọdụ ala ma zuru ike ka anyị ga-enyekwu nkọwa gbasara ndụ Mariano Diaz na nwata na ngalaba na-esote nke isiokwu a.
Mariano Diaz Ezinaụlọ sitere na Mụrụ:
Ikpe ikpe site na ọdịdị ihu nke ndị ịgba ọsọ ụkwụ, ị ga-ekwenye na ezinụlọ Mariano Diaz nwere agbụrụ agbụrụ. Eziokwu bu, otu n'ime ndi nne na nna Mariano Diaz - papa ya bu onye Spanish.
Mama ya, n'aka nke ọzọ, si Dominican Republic. Mariana Mejía bụ nwa afọ San Juan de la Maguana (obodo na obodo dị na ọdịda anyanwụ mpaghara Dominican Republic).
Naanị ilele foto a mara mma nke nne na nna Mariano Diaz, ị nwere ike ịkọwa onye n'ime ha nwere àgwà kachasị mkpa nke Mariano mechara. NSOGBU NA-EGO!
Zute ndị nne na nna Mariano Diaz - Nna ya Mariano Diaz na nne ya, Mariana Mejia.
Ezigbo Ezinụlọ: Mariano Diaz sitere na nzụlite ezinụlọ dị elu na nke etiti, nke nna ya na-arụ ọrụ n'okpukpe, n'ihi ego sitere na azụmaahịa mgbatị ya.
N'oge ahụ, kemgbe 1990s, ezinụlọ Mariano Diaz tụkwasịrị obi na ụlọ ọrụ Spanish Fitness iji nweta ego nke mere ka ha gaa.
Mariano Diaz Biography - Afọ ndị mbụ na football:
Na nwata, Mariano soro nwanne ya nwoke gbaa bọlbụ ebe ọ bụla ọ nwere ike. N'ihi nna nna ya na nnukwu nwanne ya, Mariano na-eto eto malitere ụzọ ya ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ site na nwata.
Diego Costa Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mgbe mgbasa ozi Spanish (Marca) gara n'ụlọ Mariano Diaz na Spain, mama ya gwara ha ihe ndị a gbasara mbido nwa ya nwoke na football. N'okwu ya;
“Mariano na nwanne ya nwoke na-egwuri egwu mgbe niile n'ụlọ. Mgbe e mesịrị, e jiri akara bọl merụọ mgbidi ahụ ma jiri sofas mee ihe mgbaru ọsọ.
M na-ekwukarị na agaghị m azụta sofa ọhụrụ ruo mgbe ha tolitere. Nke a bụ maka na ọ bụrụ na m zụta nke ọhụrụ, ha ga-adọka ya ọzọ. Ọbụna ndị enyi Ya bụ otu ihe ahụ mgbe ọ dị afọ ise. ”
Nne Mariano na-azụlite ọkpụkpọ.
Mariano Diaz Biography - Ndụ Mmalite Ndụ:
Afọ 2002 bụ mgbe njem ịghọ ọkachamara n'ịgba bọọlụ malitere maka Mariano.
Ọnwale siri ike nke afọ ahụ mere ka ọ sonyere aha akwụkwọ agụmakwụkwọ Reial Club Deportiu Espanyol, bụkwa nke a maara dị ka RCD Espanyol ulo akwukwo. Mgbe ha sonyere na akwukwo, otutu huru Mariano dika ezigbo nwa nwoke na akwanyere ugwu.
Nke a bụ kaadị ID nke agụmakwụkwọ RCD Espanyol nke Mariano.
Mgbe ọ nọ na RCD Espanyol's Alevín B, Lluís Planagumà Ramos zụrụ Mariano. N'oge ahụ, nwatakịrị ahụ nwere mmasị maka ijeụkwụ ya nke a hụrụ dị ka omume ọma ya.
A gbasoro nnukwu ọsọ omume nke ikpuchi akara ya na ịme bọọlụ ya.
Ị maara?… Ihe mgbaru ọsọ Mariano Diaz nke 41 na agụmakwụkwọ kachasị mma ya dugara ya iji merie ya Pichichi Trophy nke ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ Spanish nyere ya Aigua del Montseny.
Mariano Diaz Photomụaka Foto- Lee ya ka ọ na-enweta onyinye dị ka ụmụaka ịgba egwu ụmụaka.
Nwatakịrị ahụ nọrọ na klọb ahụ afọ anọ nke ya Ọ B .R. kwusi ime nnukwu ihe.
Mariano Diaz Bio - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Mariano enweghị ụzọ dị mfe na Espanyol Infantil B otu n'oge oge 2005-2006. Ọ bụ ezie na ọ bụghị otu n'ime ndị kacha pụta ìhè, isi okwu ya bụ “elu".
Meetingghara iru ogo achọrọ maka nwata nke ọgbọ ahụ pụtara iyi egwu ịnọ na klọb ahụ.
N'ịhụ na oge egwuregwu ya na-agbadata na-egwu 15 nkeji kwa egwuregwu, nne na nna Mariano Diaz kpebiri ime ihe site n'ịmanye nwa ha nwoke ka ọ pụọ na klọb.
Ha debanyere aha ya na Premià agụmakwụkwọ ebe ọ na-egwuri egwu site na 2006 ruo 2008. Mgbe otu afọ gasịrị na ụlọ ọrụ ya ọzọ (Sánchez Llibre), nwata ahụ nwetara oku site na Badalona ebe ọ kwụsịrị ọrụ ntorobịa ya na 2011.
Mariano mgbe ọ nọ na Badalona, ​​ndị otu agba agbawara ọzọ. A kọwara ya dị ka ngwa ngwa ma nwee ọgụgụ isi n'ọhịa, obere obere onye ji obi ike na-egwuri egwu.
Ihe omume a dọtara Real Madrid bụ onye na-enweghị ike iguzogide ma nweta ya na 2011.
Mariano Diaz Biography - Nbilite na-ewu ewu Akụkọ nke:
Dị ka ọtụtụ ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji site na obere klọb, isonyere Real Madrid pụtara ịlaghachi na football ndị ntorobịa.
Ọganihu dị egwu mere ọrụ ụlọ ya site na ịchọta ngụkọta nke ihe mgbaru ọsọ 50 maka ụlọ akwụkwọ Real Madrid tupu onye njikwa Zinedine Zidane kwalitere ya na ndị isi egwuregwu.
Azụ merụrụ onye na-egwu egwu Karim Benzema hụrụ ka ọ na-apụta. Mana ozugbo Benzema gbakere, ohere dịịrị nwata.
Agbanyeghị, onyinye ya maka mmeri nke trophi ndị a kwesịrị.
Ọ bụrụ na ị maghị, anụ ọhịa ahụ meriri ihe niile na Madrid.
Mgbe ha nyechara Real Madrid afọ ha ga - achị iko. Mariano na 30th nke June 2017, Mariano kpebiri na ya ga-ahapụ Spain maka ahụmịhe egwuregwu bọọlụ.
Ọ bịanyere aka n'akwụkwọ maka Olympique Lyonnais ebe o tinyere ihe mgbaru ọsọ 18 na oge egwuregwu n'ihi mmekọrịta mmekọrịta zuru oke na Depf Depad na Memphis na Nabil Fekir (Goolu 19 na 18 n'otu n'otu).
N’igosipụta onwe ya ịbụ ezigbo igwe eji agba goolu, Real Madrid kpebiri ịgbatị aka ha iji mee ka nwoke ha lọta.
Mariano Diaz na Bilie na Olympique Lyonnais.
Na 29th nke August 2018, Mariano Diaz laghachiri Real Madrid ma gọzie ya uwe No7 nke Christiano Ronaldo hapụrụ.
Oge Mariano nke abụọ ya bara Madrid uru. Otu n'ime oge kachasị mma ya bịara n'oge Elclassico, na ụbọchị 1 nke Machị 2020.
Mgbe o rutere n’oche ya, anụ ọhịa ahụ okpukpu abụọ nke Real Madrid na mmeri 2-0 megide FC Barcelona na 90th nkeji.
Igwe kpakpando a na - ebili nyeere Real Madrid okpukpu abụọ okpukpu abụọ na mmeri 2-0 megide FC Barcelona na 1st nke Machị 2020 El Clasico.
Mariano Diaz's N'anya - Yaiza Moreno:
Site na ịrị elu ya na ịbụ onye ama ama na bọọlụ, o doro anya na ọtụtụ Fans ga-achọ ịmata ma nwoke nwere ihe ịga nke ọma dị ka Mariano Diaz nwere enyi nwanyị, ma ọ bụ na ọ lụrụ di n'ezie, nke pụtara na ọ nweela nwunye.
Eziokwu bụ, n'azụ ndị na-agba ọsọ na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma nke na-akpọ aha ya Yaiza Moreno Antho.
Yaiza Moreno bụ onye nlere anya na onye na-ese akwa mmiri nke ya na Mariano Diaz na-akpakọrịta kemgbe 2012. Na-ekpe ikpe site na ọdịdị ya, ọ bụ n'ezie paragon mara mma, onye bu na-eme ka ntụkwasị obi dabere na ọnyà ọ bụla.
Zute Mariano Diaz's Girlfriend, Yaiza Moreno - Ọ bụghị na ọ mara mma?
Mmekọrịta Mariano na Yaiza ena-enyocha nyocha nke ọha na eze naanị n'ihi na ọ na-enweghị ihe nkiri na ịhụnanya jupụtara na ya.
Mma Yaiza n'ezie bụ onye na-adịghị achọ ọdịmma onwe ya nanị nke na-adịghị eme ihe ọ bụla karịa ịkwado nwoke ya nkwado mmetụta uche, n'agbanyeghị na ọ pụtara itinye ndụ ya na njide.
Nwanyị nwanyị Mariano Diaz Yaiza Moreno na-akwado nwoke ya n'ihe niile ọ na-eme.
N'oge Mariano laghachiri Real Madrid, ọtụtụ nde ndị Fans hụrụ ụzọ enyi ya nwanyị mara mma n'oge ngosi ya.
Ikpe ikpe site na foto dị n'okpuru, ọ na-egosi Yaiza nwere ndị nne na nna Mariano Diaz kwadoro. Nke a na-egosi na agbamakwụkwọ ha nwere ike ịbụ usoro mbụ nke mbụ.
Nwanyị nwanyị Mariano Diaz Yaiza Moreno sere mgbe ọ na-ekwu okwu na Madrid.
Mariano Diaz Web:
Mata ụdị ndụ Mariano Diaz ga-enyere gị aka ịmatakwu ụdị ndụ ọ bi.
Malite, inwe nnukwu ọnụọgụ ahịa, uru ahịa nke € 16m ma na-enweta ụgwọ ọnwa kwa afọ nke € 5million (n'oge ederede) n'ezie mere ya onye millionaire edu. Obi abụọ adịghị ya, Mariano nwere ike ibi ndụ okomoko.
N’ikwu okwu banyere ibi ndụ, Mariano Diaz na-ebi ndu na Madrid. Ọ bụrụ na enyere ya ohere, ihere agaghị eme ya igosipụta akụnụba ya (nnukwu ụlọ), uwe mara mma, elekere aka, ụgbọelu ndị ọzọ, ụgbọ mmiri wdg.
N’okporo ụzọ Madrid, o yikarịrị ka ị ga-ahụ Mariano na-eji ejiji na-enweghị isi na nke kachasị mkpa, na-anya ụgbọ ala ụlọ akwụkwọ flashy ochie ya.
Ihe dị ka ụgbọ mmiri Mariano Diaz bụ eziokwu, ọ na-ahọrọ ụzọ ụlọ akwụkwọ ochie.
Ewezuga football, Mariano bụkwa ezigbo ọkwọ ụgbọ ala. Ị maara?… N'otu oge, ọ gụchara nke atọ na asọmpi na-aga-ahaziri nke Audi. Ọ hapụrụ nke atọ n'azụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ngwa ngwa; Nacho na Ramos.
Mariano Diaz Ndụ Onwe Gị:
Ọnye na-bụ Mariano Diaz off the Pitch?… Azịza ya bụ, he bu mmadu ahu nwere obi iru ala. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ezì na sharks, mgbe ahụ ị nọghị naanị gị.
Eziokwu bụ, ọ ga-abụ na obi ga-atọ gị ụtọ ịnụ na Mariano dị ka gị- A Die-Hard Pig na Shark hụrụ.
Mariano nwere mmasị ịga ebe aha ya bụ “Paradise”Na Bahamas, ebe ya na ezigbo ndi enyi ya na-emekọrịta (lee anya n’okpuru). Onye ma?… Mariano nwere ike ịnakwere otu n'ime anụmanụ ndị a.
Mata Mariano Diaz Ndụ nke Onwe gị pụọ na egwuregwu.
N'ikpeazụ, na ndụ Mariano Diaz, ọ bụ onye na-ejide aka mmasị ya nke na-aga dị ka ndị a;
“Ọ dị mkpa ileba anya mgbe niile ebe ị na-aga, kama ịchọ ebe ị nọ”.
Mariano Diaz Ndụ Ezinụlọ:
Nye ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ụkwụ, okporo ụzọ nke kpakpando agaraghị enwe obi ụtọ dị ka ọ na-enweghị enyemaka nke ndị òtù ezinụlọ.
N'ikwu banyere ezinụlọ, ọ dị ka Mariano anaghị eto naanị ya na ndị mụrụ ya, kamakwa ya na nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị mara mma.
N'akụkụ a, anyị ga-enwetakwu ìhè na nne na nna Mariano Diaz na ndị ọzọ mara mma.
Ezigbo ezinụlọ nke Mariano Diaz anyị nwere ike ịchọta. Ugbu a lelee usoro nna ya.
More banyere papa Mariano Diaz:
Ikpe ikpe site na nnukwu ihu ya na foto dị n'elu, ị ga-ekwenye na nna Mariano Diaz n'ezie yiri onye na-ewu ụlọ. Eziokwu bụ, ọ bụbu onye mmeri Spanish na nsọpụrụ na-ebuli elu.
Ọbụna n'oge ọ dị afọ ndụ, Mariano Diaz Snr ka na-agba mgbatị ya na Ezià del Mar, mpaghara dị n'ụsọ oké osimiri Catalunya ebe a mụrụ nwa ya nwoke bụ Mariano. N'ikwu okwu banyere mmetụta nna ya na-enwe n'ọrụ ya, Mariano kwuru otu oge;
“Ọtụtụ mgbe, m na-eso papa m gaa mgbatị ahụ. Ekele dịrị ya, amụtara m ịgbatị ahụ na mgbochi mmerụ ahụ, bụ ndị dịcha mma maka ọrụ m. ”
More banyere nne mama Mariano Diaz:
Ezigbo nne amịpụtala ụmụ nwoke bọọlụ na-aga nke ọma na Mariana Mejía abụghị otu. Ọ bụ nwa afọ San Juan de la Maguana (obodo na obodo dị na ọdịda anyanwụ mpaghara Dominican Republic) site na ọmụmụ ya na ezinụlọ sitere.
Ị maara?… N'ime ndị nne na nna Mariano Diaz, ọ bụ Mariana Mejía bụ onye nwere mkpụrụ ndụ kachasị dị ka nwa ya nwoke na nwa ya nwanyị lebara anya na agba ya.
N'okpuru ebe a, ma Mariana na Mariano nwere mmekọrịta chiri anya.
Zute Nne Mariano Diaz- Mariana Mejía- Ha abụọ yiri ka ha dị nso.
More banyere nne nna ochie nke Mariano Diaz:
A na-akpọkarị nna nna ochie Mariano Mariano Diaz Snr 2. He ọ bụ ọrụ maka bọl na-abanye n'ime ọbara ezinụlọ.
Enweghị ya, Mariano agaraghị abụ ndị nrịba ama. N'ezie, njirimara nke ịghara ịda mbà sitere n'aka nna nna ya, onye bụbu onye na-agba ọsọ na ịdọ aka ná ntị bụ onye na-egwuri egwu maka obere ụlọ Catalan.
More banyere Marimụnna Mariano Diaz:
Mariano Diaz nwere nwanne nwoke nke aha ya bụ Eduard Marcel Núñez (sere n'elu). Dị ka Mariano, ọ bụkwa onye egwuregwu bọọlụ na-egwuri egwu maka CE Vilassar de Dalt.
Nke a bụ otu egwuregwu bọọlụ dị na obodo dị na Catalonia, Spain (na mpaghara Barcelona).
Ọzọkwa iji mee ka ị mara, nwanne nwanne Mariano bụ Eduard Marcel Núñez bụ nwanne nwoke nke nwanne nwoke ọzọ aha ya bụ Pedro Antonio Núñez. Pedro, bụkwa onye a mụrụ na Hato Mayor del Rey, Dominican Republic.
More banyere nwanne nwanyị Mariano Diaz:
Na-ekpe ikpe site na ezinụlọ ezinụlọ dị umeala n'obi dị n'elu, ị ga-ekwenye na anyị na ọ dị ka Mariano nwere nwanne nwanyị, onye na-amasị ụmụnne ya ndị ọzọ were mgbe mkpụrụ ndụ mama ya kachasị.
Mariano Diaz si Eziokwu Banyere:
N'ezie #1: Ndị Nwara Mpụ:
Mariano Diaz bụbu onye e mere ihe ohi wakporo. Ihe a merenụ mere mgbe ọ gara na ụlọ ahịa okomoko dị na Calle Serrano Street, Madrid (Madrid)Nlekọ akụkọ ntanetị nke Ronaldo).
Ka mmadụ na-aga n’okporo ụzọ bu ngwongwo ihe ndị ọ ka zụtara, otu onye bịakwutere ya ma nwaa ike ntụtụ akpa ahụ. Mgbe o tichara mkpu maka enyemaka, onye ahụ na-enyo enyo wee gbaga n'akụkụ nke ọzọ n'okporo ámá.
Mmadu abuo gbara ososo onye ahu zuru ohi akpa Mariano. Mgbe e mechara ya ike, ọ kwụsịrị ịtụnye akpa ndị ahụ n’ala.
Nke a na - esote Mariano na - atụtụ ya ma hapụ ebe ahụ n’ekweghị ka ndị uwe ojii tinye aka.
N'ezie #2: Ọ hapụrụ igwu egwu maka nne nne ya:
N'otu oge, Mariano nakweere ntozu ya maka egwuregwu Dominican Republic site na nne ya. N’ihi nke a, o mere egwuregwu mba ụwa nke mbụ ya n’abalị iri abụọ na anọ n’ọnwa Machị 24 n’egwuregwu enyi na mba Haiti, wee merie ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ na mmeri 2013-3.
Ị maara?… nke ahụ bụ ma eleghị anya egwuregwu ikpeazụ ya tupu ya ekpebie ịhapụ mba mama ya. Mariano mere nke a iji zere ịghara ịbụ okpu-kegide Ọzọkwa, n'ihi elele ndị otu mba Spain nwere ike ịkpọ.
Ihe mmepe a emeela ka ọ jụ ịkpọ oku ọzọ site na mba nne ya.
N'ezie #3: A Julia Roberts Fan:
N'ime ụwa ndị na - eme ihe nkiri Hollywood, Real Madrid enwetawo ikike ụfọdụ.
Ị maara?… Julia Roberts bụ otu n'ime ndị ọkpọ ama ama ama ama ama ama ama okosobo ye Mariano. Foto dị n'okpuru bụ ya na Mariano Diaz n'otu n'ime nleta ọ gara n'isi obodo Spain.
Real Madrid Star zutere Julia Roberts.
N'ezie #4: Ọda Ya Na-akwụ ụgwọ:
Kemgbe ọ laghachiri na Real Madrid, ndị agba bọọlụ amalitela ịchọpụta eziokwu Mariano Diaz, dị ka ego ole ọ na-enweta n'aka onye ọrụ Spanish.
Na 29 August 2018, Mariano kara Real Madrid na nkwekọrịta afọ ise, nke hụrụ ya na-etinye ego na-akwụ ụgwọ gburugburu € 4million kwa afọ. Na-agbanye ụgwọ ọnwa Mariano Diaz ka ọ bụrụ ọnụọgụ pere mpe, anyị nwere ihe ndị a.
Inwe ego na Pounding Pound (£)
Inwe ego na USD ($)
Kwa Afọ € 5,000,000 £ 4,294,250 $ 5,643,100.00
kwa ọnwa € 416,666 £ 357,854 $ 470,258
Kwa Izu € 104,116 £ 89,463.5 $ 117,564
Kwa .bọchị € 14,881 £ 12,780.5 $ 16,795
Kwa elekere € 620 £ 532.5 $ 699
Kwa Nkeji € 10.3 £ 8.86 $ 11.6
Sekọnd € 0.17 £ 0.14 $ 0.19
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Mariano Diaz'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Onye ọrụ na-arụ ọrụ na Spain kwesịrị ịrụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 2.3 iji kpata € 333,333 nke bụ ego anyị nwere Mariano Diaz na-enweta n'otu ọnwa.
N'ezie #5: Mariano DiazTattoos:
Mariano kwenyere na omenala igbu egbugbu nke amara nke oma n’egwuregwu taa. Dịka a hụrụ n'okpuru, onye na-agba bọọlụ Los Blancos nwere egbugbu na-egosipụta okpukpe ya na ihe ndị ọ hụrụ n'anya.
Anodị Mariano Diaz- Ndị na-agba ọsọ nwere ọtụtụ akara aka na aka ekpe ya.
N'ezie #6: Mariano DiazOkpukpe:
Na-ekpe ikpe site na eserese egbugbu Mariano Diaz nke nwere ihe osise nke Virgin Mary, ị ga-ekwenye na m na nne na nna ya nwere ike zụlite ya ịgbaso okwukwe okpukpe Ndị Kraịst nke Katọlik.
Mariano Diaz si Wiki:
N'ikpeazụ, na Mariano Diaz's Biography, anyị na-enye gị ntọala wiki ya. Tebụl dị n'okpuru ga-enyere gị aka ịchọta ozi banyere ya n'ụzọ dị nkenke ma dị mfe.
Eziokwu Mariano Diaz (nyocha nke Wiki)
Aha n'uju: Mariano Díaz Mejía.
Andbọchị na Ebe Ọmụmụ: 1 Ọgọstụ 1993 (afọ 26), Premierà de Mar, Spain.
Ndị nne na nna: Mariano Diaz Snr (Nna) na Mariana Mejía (Nne).
Nwanne Eduard Marcel Núñez (nwanne nwoke nke nwanyị) na Nwanne nwanyị
Ezinụlọ Ezinụlọ: Spain (nna nna ya) na Dominican Republic (akụkụ nne)
elu: 1.80 m (5 ft 11 na)
arọ: 76 kg
-arụ: Onye na-agba ya (Striker)
Nkwanye ugwu (Dika emere na Maachị 2020) La Liga: 2016–17,
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata anyị nke Mariano Diaz Plus Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.